Mootummaa Wayyaanee Qabsoon Gatantarsiifne Kuffisuun Salphaa dha! - Welcome to bilisummaa
Saphaloo Kadiir irraa,
Akkuma beekkamu hojjattoonni manneen hojii mootummaa keessatti qacaramanii hojjatan humna mootummaa diddiiguufi qabsoo hawaasaan godhamu finiinsuu keessatti shoora guddaa taphatu. Qabsoo hanga ammaa hawaasa Oromoon godhamaa tureefi bu’aa guddaa galmeessise kana keessattiis gaheen hojjattoonni mootummaa sadarkaa gadii irraa hanga oliitti gumaachaniis baayyee gaariidha. Odeeffannoo iccitaawaa dabarsanii kennuu irraa jalqabee hanga ragaalee qaama bulchiisa wayyaanee ol aanaa baasuu, xalayaa qoruumsa biyyooleessa kutaa 12ffaa dabalatee odeeffannoo biraas aktiivestoota‪#‎Oromoprotests‬‘iif kan dabarsaa turan qaamuma mootummaa kana keessa hojjachaa jiran akka tahe beekkamaa dha. Barsiisoota, bakka bu’oota ummataa, ogeeyyii fayyaa, qaama seeraatiifi ogeeyyoota ogummaa adda addaan mootummaa kana keessatti qacaramanii hojjachaa jiran kun ammaas tahee fuulduraas sirritti Oromoofi Oromiyaafiis kan barbaachisan waan taheef maxxanfachuu, hariiroo jabaafi hidhata cimaa waliin uumuun gumaacha isaanii akka dabalan taasisuun qooda qabsoo guddisuun humna humna mootummaa kanaa dhawanii akka caaseeffama isaa diigan godhuun gaarii dha. Hirmaannaa sadarkaa gadiitii hanga qaama ol’aanaatti hojjattoonni mootummaa kun warraaqsa qabsoof taasisan kana irraa ka’uun wayyaaneen ragaa qabatama malee shakkii qofaan kumaatama hojii irraa ari’uun beekkamaa dha. Gara adeemsa qabsoo kanatti akka hin dhufnees uggura addaatiin daangawaa jiran. Daangaaleen kun immoo caccaphuu qaba.
Previous OROMOOTA GODINA ARSII LIXAATIIF
Next Dhimmii cufamuu kuusaa Kosii Sandaafaa kun laayyotti laalamuu hin qabu.